အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – ရင့်ကျက်မှုကုို ဘယ်လုိုအဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်မလဲ ဦးရဲထွဋ်ကုို မေးချင်တယ် – MoeMaKa Burmese News & Media
သီရိလင်္ကာနုိုင်ငံမှာ နှစ်အနည်းငယ်မျှ နေခဲ့စဉ်က မြန်မာသံအမတ်ကြီးရဲ့ နေအိမ်ကုို ဖါးအောက်ဆရာတော်ဘုရာကြီးကုိုမှီပြီး ဆွမ်းစားပင့် သွားရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဟိတ်ဟန်နည်းပုံရတဲ့ သံအမတ်ကြီးနဲ့ ထုိုမတုိုင်ခင်ကလည်း တွေ့ဆုံစကားပြောဖူးပါတယ်။ သံအမတ်ကြီးဟာ တပ်မမှူးဘဝကနေ သံအမတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်လုို့ သိရတယ်။ နောက်ပုိုင်း ထုိုသံအမတ်ကြီးဟာ တခြားအာရှနုိုင်ငံတနုိုင်ငံကုို သံအမတ်ရာထူးနဲ့ပဲ ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်လုို့ ကြားသိခဲ့ရတယ်။ ဒီရက်ပုိုင်းအတွင်း သတင်းတပုဒ်ကုို ဖတ်နေစဉ် သတင်းထဲမှာ ထုိုသံအမတ်ကြီးရဲ့ နာမည်ကုို မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့လုိုက်ပါတယ်။ သူ့နာမည်ရှေ့မှာ နုိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးဆုိုတာကုိုပါ တွေ့လုိုက်ရတော့ ပုိုစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ ရုတ်တရက် အံ့သြသလုိုဖြစ်သွားခဲ့ပေမယ့် အံ့သြစရာမဟုတ်မှန်း ချက်ချင်းပဲ သတိပြန်ဝင်လာပါတယ်။
သူ့မိသားစုလှူတဲ့ဆွမ်းကုို စားဖူးပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဘာပြဿနာမျှ မဖြစ်ဖူးတဲ့ သူ့ကုို ယခင်ထက် ပုိုအဆင့်မြင့်တဲ့ ရာထူးနေရာမှာ ရောက်နေပါလားဆုိုတာ သိရတော့ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ အထွေအထူး မခံစားရပေမယ့် မိမိတုို့နုိုင်ငံဟာ ဒီလုိုပုံစံမျိုး ဘယ်အချိန်တုိုင်အောင် ဆက်သွားနေအုံးမလဲ ဆုိုတဲ့အတွေး ဝင်လာပြန်ပါတယ်။
ဟုိုတနေ့ကပဲ VOA ဒေါ်ခင်စုိုးဝင်းနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က မြန်မာ့နုိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအားလုံး ရင့်ကျက်သွားတဲ့တနေ့ကျရင် စစ်တပ်ဟာ နုိုင်ငံရေးကနေ စွန့်ခွာသွားမယ်လုို့ ပြောသွားပါတယ်။ စစ်အစုိုးရအရာရှိကြီးတွေရဲ့ ဒီလုိုအပြောမျိုးတွေကုို ယခင်ကလည်း မကြာခဏ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဦးရဲထွဋ်ကုို မေးချင်တာက ရင့်ကျက်မှုကုို ဘယ်လုို အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်မလဲ ဆုိုတာပါ။
နုိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသူတွေ မရင့်ကျက်သေးဘူး။ ဒါကြောင့် စစ်တပ်က ဝင်ထိန်းပေးနေရတယ်ဆုိုတဲ့သဘော။ စဉ်းစားကြည့်ရင် အတော်ကုို တင်စီးတဲ့စကားပါ။ စစ်တပ်က နုိုင်ငံရေးမှာ ဝင်ထိန်းခဲ့တာကြောင့် နုိုင်ငံဘယ်အခြေဆုိုက်သွားခဲ့ပြီလဲ။ တကယ်တော့ ထိန်းတာမဟုတ်ဘဲ နုိုင်ငံကုို ရစရာမရှိအောင် ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတော့ ရာစုနှစ်ထက်ဝက်ကျော် နုိုင်ငံကုို ဖျက်ဆီးခဲ့တာ အားမရနုိုင်သေးလုို့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကုို အဓမ္မအတည်ပြုပြီး နုိုင်ငံရေးမှာသာမက စီးပွါးရေးမှာပါ လက်ဝါးကြီးအုပ်မယ့် စစ်ဗုိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ရေရှည်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကုို ပြည်သူတွေ ကောင်းစွာ သဘောပေါက်နေကြပါပြီ။
တသက်နဲ့တကုိုယ် ကြုံဖူးသမျှ နုိုင်ငံရဲ့ သမ္မတတွေမှာ အရပ်သားသမ္မတဆုိုလုို့ တလလောက် သမ္မတလုပ်သွားတဲ့ ဒေါက်တာမောင်မောင်မှတပါး ကျန်တဲ့ သမ္မတအားလုံးဟာ စစ်ဗုိုလ်ချုပ်တွေချည်းသာ။ ကျန်တဲ့ ဝန်ကြီး ညွှန်ချုပ် ညွှန်မှူး သံအမတ် စတဲ့ ရာထူးတွေကုိုလည်း စစ်အရာရှိတွေနဲ့ စစ်အရာရှိဟောင်းတွေပဲ အများစု ယူထားခဲ့တာ ယနေ့အထိပါ။
မဆလခေတ်တလျှောက်လုံးမှာ အာဏာအရှိဆုံးသူဟာ ဦးနေဝင်းပါ။ ရာထူးနာမည်ကတော့ အမျိုးမျိုးပြောင်းခဲ့တာပေါ့။ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဌအဖြစ်မှာ အာဏာအရှိဆုံးသူဟာ ဦးနေဝင်းပါ။ နုိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်မှာလည်း အာဏာက သူ့လက်ထဲမှာပါ။ သမ္မတရာထူးကုို တခြားဗုိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ဆီကုို လွှဲပြီး မြန်မာ့ဆုိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဌအနေနဲ့လည်း တကယ်အာဏာရှိသူက ဦးနေဝင်းပါပဲ။ ၈၈ နောက်ပုိုင်း သူအနားယူသွားခဲ့သော်လည်း နှစ်အတော်ကြာတုိုင်အောင် နောက်ကွယ်မှာနေပြီး သူ့ရဲ့ သြဇာဆက်လက်တည်မြဲခဲ့တယ်။
မြန်မာ့နုိုင်ငံရေးမှာ နောက်ကွယ်မှ အာဏာကြိုးကုိုင်တဲ့ ဦးနေဝင်းချမှတ်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာကုို ဦးသန်းရွှေ ဆက်ခံနေဆဲပါ။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ(ကာလုံ)မှာ ပါဝင်သူတွေရဲ့ အချိုးအစားအရ ယနေ့ စစ်တပ်သွားနေတဲ့ ဒီမုိုကရေစီအရေခြုံခေတ်မှာ ဗီတုိုအာဏာဟာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လက်ထဲ ရောက်နေပါတယ်။ (၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အခန်း ၅၊ အပုိုဒ်ခွဲ ၂၀၁)။ ကာချုပ်နောက်မှာ ဦးသန်းရွှေ ရှိနေတာကုိုလည်း ပြည်သူအများ နားလည်လက်ခံထားကြတယ်။ သဘောက တကယ့်ဗီတုိုအာဏာအစစ်ကုို ဦးသန်းရွှေ ပိုင်ဆုိုင်ထားပါတယ်။
ကာချုပ်ကလည်း ဒုို့တာဝန်အရေးသုံးပါးဆုိုတဲ့ မန္တာန်ကုို မပြတ်ရွတ်ပြီး ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ မပြင်ဆင်ရေး၊ အစုိုးရနဲ့ လွှတ်တော်မှာ နုိုင်ငံရေးအာဏာတွေကုို စစ်တပ်က ဆက်လက်ယူထားရေးကုို အသေဆုပ်ကုိုင်ထားမယ့် သဘောပါ။ (၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အခန်း ၁၊ အပိုဒ်ခွဲ ၆)။ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ သူတို့ အကြောင်းပြချက်ပေးလေ့ရှိတာက အီရတ် ဆီးရီးယားစတဲ့ အရှေ့အလယ်ပုိုင်းဒေသက နုိုင်ငံတချို့လုို ဖြစ်သွားစေချင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားစေချင်သလားပေါ့။
သေချာတာက ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတည်မြဲနေသရွေ့ မြန်မာနုိုင်ငံဟာ သူတုို့အပြောအရ ဘယ်တော့မှ ရင့်ကျက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မရင့်ကျက်မှလည်း ပြည်သူတွေကုို ဆက်လက် စစ်ကျွန်ပြုထားနုိုင်မှာ မဟုတ်လား။ ပြည်သူတွေရဲ့ ရာစုနှစ်ထက်ဝက်ကျော် ခံစားလာခဲ့ရတဲ့ ဘဝပေးအသိကုို စကားလုံးတွေနဲ့ ဝေ့ဝုိုက်ကွေ့ပတ်ပြီး တဖက်မှာ အာဏာနဲ့ ဖိထားလုို့ မရနုိုင်တော့တာကုို သူတုို့ မသိကြတာလား။ သိလျှက် လူမုိုက်အတွေးနဲ့ ဇွတ်တုိုးနေကြတာလား။
တကယ်တော့ မြန်မာ့နုိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဟာ ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာအဆင့်မှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျားသနားဖုို့ဆုိုတာကလည်း လက်တွေ့မှာ အင်မတန်ကုို ဖြစ်နုိုင်ခြေနည်းတဲ့ ကိစ္စပါ။
နဝတစစ်အစုိုးရခေတ်က အရှေ့တောင်တုိုင်းစစ်ဌါနချုပ်က ဗုိုလ်မှူးကြီးတယောက်ရဲ့ အိမ်ကုို သံဃာများနဲ့အတူ တပတ်လောက် ရက်ဆက် ဆွမ်းစားပရိတ်ရွတ် သွားဖူးပါတယ်။ ထုိုအိမ်ရဲ့ ဧည့်ခန်းနံရံမှာ အသက်တစ်ထောင်ကျော်ပြီ ဆုိုတဲ့ ဘုန်းကြီးပုံတပုံကုိုလည်း ချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ ထုိုဘုန်းကြီးအကြောင်းကုို သူတုို့ တကယ်ကုို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ သူတုို့ရဲ့ ယုံကြည်ကုိုးကွယ်မှုတွေဟာ အင်းအုိုင်လက်ဖွဲ့ စတာတွေနဲ့ ယတြာအစွမ်းကုို မျှော်ကုိုးတဲ့ ကုိုးကွယ်မှုတွေက ခပ်များများ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကောက်ချက်ချရရင် ပုခုံးပေါ်မှာ အပွင့်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး သူတုို့ရဲ့ တရားစစ်တရားမှန်အသိအမြင်ဗဟုသုတတွေက သုညသာသာပဲ ရှိနေသေးတာပါ။
သူတုို့ရဲ့ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကုို ကြည့်လိုက်တော့ ဘုရားထီးတင်ပွဲတွေ ဘာသာရေးဆုိုင်ရာ အခမ်းအနားပွဲတွေကုို တက်ရောက်ကြတယ်။ ကြေးပြားကျောက်ပြားတွေပေါ်မှာ ချီးမွမ်းထောမနာ ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေနဲ့ အလှူမှတ်တမ်းတွေကုို ကမ္ဗည်းထုိုး ရေးထွင်းကြတယ်။ စသည်ဖြင့် မြင်တွေ့ရနုိုင်ပါတယ်။
ကြေးပြားကျောက်ပြားတွေပေါ်မှာ ရေးထွင်းထားကြတဲ့ စာတွေဟာ သူတုို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲကုို ရောက်သလား။ မရောက်သလားဆုိုတာ မေးနေစရာ မလုိုတော့ပါဘူး။ တောင်သူလယ်သမားများရဲ့ လယ်ယာမြေတွေကုို မတရားသိမ်းယူပြီး လူကုိုပါ အဓမ္မပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲထောင်ချနေကြတယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ သတင်းသမားများ နုိုင်ငံရေးတက်ကြွသူများကုို မတော်မတရား ဖမ်းဆီးထောင်ချသတ်ဖြတ်နေကြတယ်။ သူတုို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု ကင်းမဲ့ပုံတွေ၊ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်း ရုိုင်းစုိုင်းယုတ်မာရက်စက်ပုံတွေကုို သူတုို့ရဲ့ လက်တွေ့လုပ်ရပ်တွေက ထင်ထင်ရှားရှား ဖေါ်ပြနေပါတယ်။
သူတုို့ ပြောတဲ့ ရင့်ကျက်မှုဆုိုတာက ထားရာနေ စေရာသွား ခံမပြောနဲ့။ ဖမ်းဆီးပစ်မယ်။ တရားစွဲပစ်မယ်။ ထောင်ချပစ်မယ်။ သတ်ပစ်မယ် ဆုိုတဲ့ အနုိုင်ကျင့်ဝါဒနဲ့ လူတွေကုို ကြောက်ရွံ့ငြိမ်ကုပ်နေအောင် လုပ်ထားတာကုို ဆုိုလုိုပုံရတယ်။ လက်နက်အားကုိုး အာဏာသုံးပြီး အထက်စီးမှ နှိပ်ကွပ်ဖမ်းဆီး အနုိုင်ပုိုင်းခြင်းဟာ အဖြေမဟုတ်သလုို ဘယ်သူ့အတွက်မှလည်း အကျိုးမရှိပါဘူး။ ဓမ္မရှုထောင့်က ကြည့်ကြည့်၊ လူ့ယဉ်ကျေးမှု လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရှုထောင့်က ကြည့်ကြည့်၊ တရားမျှတမှု လူသားအခွင့်အရေး ဒီမုိုကရေစီရအခွင့်အရေးရှုထောင့်ကပဲ ကြည့်ကြည့် လုံးဝမှားယွင်းနေတာကို သူတုို့ နားလည်နုိုင်စွမ်း မရှိကြတာဟာ တကယ်ကုို ဝမ်းနည်းစရာပါ။
ပြဿနာက အပြောများတဲ့ စကားတခွန်းဖြစ်တဲ့ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု မရှိခြင်းပါပဲ။ တုိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ အတုိုက်အခံအင်အားစုတွေရဲ့ မယုံကြည်မှုက ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လက်တလော မတရားမှုတွေနဲ့ အတိတ်သင်ခန်းစာတွေကြောင့် အာဏာရှိသူတွေရဲ့ စေတနာကုို မယုံကြည်တာပါ။
အာဏာရှိသူတွေရဲ့ မယုံကြည်မှုက ကုိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်းမရုိုင်းဆုိုသလုို တုိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ အတုိုက်အခံအင်အားစုတွေက တချိန်မှာ သူတုို့ကုို တဖန်ပြန်လည် လက်တုံ့ပြန်လာနုိုင်မှုဆုိုတဲ့ မလုံခြုံမှုအပေါ် အခြေခံတဲ့ မယုံကြည်မှုလုို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီမယုံကြည်မှုတွေရဲ့ ထွက်ပေါက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆုိုထားတဲ့ လေးပွင့်ဆုိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဟာ လက်ရှိမြန်မာ့နုိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့ ထွက်ပေါက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လုို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။
← ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – နိုင်ငံရေး ၀တ္ထုရေးဆရာ၏ တာဝန်များ
“Kempinski ဟိုတယ် – နေပြည်တော်” တရားဝင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ →
Han Thit Naing – News
April 6, 2016 Aung Htet
3 thoughts on “အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – ရင့်ကျက်မှုကုို ဘယ်လုိုအဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်မလဲ ဦးရဲထွဋ်ကုို မေးချင်တယ်”
They have no brains and they have no wisdom. That s why they say stupid things in public. All they care about is themselves.
အရှင်စ၊န္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) says:
အားပေးဖတ်ရှု ထောက်ပြဝေဖန်ပေးကြသူအားလုံးကုို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။